कवि दुर्गालाल सिर्जनामा अझै जवान
साउन कृष्ण एकादशीको दिन (यस वर्ष साउन २० मा) जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ छयासी वर्ष पुगेर सतासी वर्ष टेक्दै हुनुहुन्छ । उमेरले उहाँ जीवनको उत्तराद्र्धमा हुनुहुन्छ । उहाँका सत्तरीभन्दा बढी कृति प्रकाशित भइसकेका छन् । सिर्जनाको हिसाबले भने उहाँ अझै जवान हुनुहुन्छ ।
ऋतुपर्व आदि आउँदा तिनैसित सम्बन्धित् गीत/कविता लेख्ने उहाँको पुरानो बानी हो । त्यो उहाँमा अझै छ । अनि देश विदेशमा भइरहने मानवतासित जोडिएका कुनै पनि घटना विशेषमा जागरुक र संवेदित भई कवितामार्फत नै प्रतिक्रिया जनाउने बानी पनि यथावत नै छ । गत सालको इन्द्रजात्रामा उहाँले यस्तो कविता रच्नुभएको थियो । उक्त कविताको अंश –
न्याय थियो उहिले यति गहिरो
यो नेपाली माटोमा,
इन्द्रतकै पनि उभिनु परेथ्यो
दण्डित भै दोबाटोमा !
यही सत्य–निर्मित संस्कृतिले
छ खडा हेर उचाली आफ्नो
गौरव हिमगिरिभाल !
अनि आफ्नै नवजात पनातिनीको जन्ममा पनि आफ्नो मनमा उब्जेको भावना कवितामा पोखिहाल्नु हुन्छ । यस कविताको अंशलाई पनि यहाँ उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ –
हुनुमा अबोध शिशु हुनु नै हो
हुनुको निख्खर नाम !
परमेश्वर नै त्योसँग दाँज्नु
बिलकुल हो बेकाम !
हो म त्यही बच्ची हेर्दैछु
अहिले, हो अहिले;
र त्यही बच्ची म पनि हुँदै छु
जबकि थिएँ उहिले !
राम्रा नराम्रा सबै समसामयिक घटनाहरूले कवि–हृदयलाई छोइरहेका हुन्छन् । देशको भूमि वा जनताको घर अतिक्रमित भएको बेला होस्, कुनै पनि घटनाले उहाँलाई केही छुन्छ त तत्काल कविता कोरिहाल्नु हुन्छ । न्याय र जनताको पक्षमा साथ दिनुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारी ठान्नु हुन्छ । रुकुमको सोती घटना होस् वा अमेरिकी प्रहरीबाट कालो जातिका मानिसको हत्या भएको घटना होस्, उहाँ संवेदनाले उद्वेलित भइहाल्नु हुन्छ । रुकुम घटनाको समाचार सुन्दै उहाँले कविता लेख्नुभएको थियो–
ऐँजेरुको झार !
सामाजिक मुद्दा बोकेका जुलुस, जनसभामा पनि उहाँ शरीरले धानेसम्म उपस्थित नै हुनुहुन्छ । त्यस्तैमा एउटा घटना हो, २०७६ सालमा ल्याइएको गुठी विघेयक । यो विधेयकको विरोधमा माइतीघर मण्डलामा भएको विशाल जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्न पनि उहाँ पुग्नुभएको थियो । काठमाडौँमा सडक फराकिलो बनाउने नाउँमा जनताको घर भत्काउने कार्यको विरोधमा पनि उहाँ पीडितहरू सँगै हुनुहुन्छ । अहिले कोरोना कालमा बाहिर गएर पीडित जनताको माझ आफ्नो सहभागिता जनाउन नसकिएको अवस्थामा उहाँले आफ्नो सन्देश वा कविता सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्न छुटाउनु भएको छैन ।
त्यस्तै अर्को घटना हो, ऐतिहासिक थलो खोकनामा स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण । खोकनाका जनता र सम्पदा प्रेमीले त्यसको विरोध प्रदर्शन गर्दै थिए । त्यस्तैमा उहाँले एक पत्रिकामा खोकनाका दुई बालबालिका झ्यालबाट हेर्दै हाँस्दै गरेको तस्बिर छापिएको देख्छन् । झ्यालमा खुर्सानी सुकाइराखेको पनि हुन्छ । तस्बिर हेर्दै ती दुई बालबालिकामा उहाँ खोकनाको भव्य विरासत देख्नु हुन्छ, अनि उहाँको कलमबाट कविता प्रवाहित हुनथाल्छ–
खुर्सानीको माला पैह्री
उभिएको देख्दा लाग्यो
यद्यपि सिर्जनामा उहाँको युवा जोस टुटेको छैन । तर उहाँभित्र मृत्यु चेतना आउँदै गरेको उहाँका रचनाहरूमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । दुर्गालालले आफू चौसठ्ठी वर्षको हुँदै नेपालभाषामा कविता–सङ्ग्रह सिर्जना गर्नुभएको थियो– ‘बीनिभालय् व्हःगु ख्वीप्यफ्वः स्वां’ अर्थात् ‘ढल्किँदो घाममा फुलेका चौसठ्ठी फूल’ । यो कविता–सङ्ग्रहमा जहाँ उहाँ डुब्दै गरेको सूर्यसित वार्तालाप गरिरहनु हुन्छ, त्यहीँ उहाँ ढल्किँदो सूर्यसित एकाकार पनि भइरहनु हुन्छ । नेपालभाषाका ज्ञाता डा. डेविड हाग्र्रिभ्सको हातमा सो पुस्तक पर्छ र उहाँलाई ती कविताले छुन्छ । भाषाशास्त्रका प्राध्यापक हाग्र्रिभ्स आफैँ पनि कवि हुनुहुन्छ । यो कृति अनुवादकै लागि भनेर हाग्र्रिभ्स दुई महिनाका लागि काठमाडौँ आउनुहुन्छ, कविसँग बस्नु हुन्छ । अनि त्यो कविता–सङ्ग्रहको अङ्ग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुन्छ– ‘दि ब्लसम्स् अप्m सिक्स्टी–फो सनसेट्स’ ।
हुन त ‘फूलको आँखामा’ गीतमा रहेको अन्तिम चरणमा पनि उहाँले आफ्नै बाह्य र आन्तरिक अवस्था स्पष्ट पार्नुभएको छ –
टहटह जून देखूँ कालो रातैमा
जीवन सङ्गीत सुनूँ म सुक्खा पातैमा
मृत्युलाई सम्झेर पनि उहाँले नेपाल भाषामा (ग्वींनिला, ने. सं. ११२०) कविता लेख्नुभएको छ । नेपाल भाषामा लेखिएको यो कविताको भावार्थ यस्तो छ–
कुर्ने क्षण तर सबभन्दा पछि
मेरै मृत्यु म जब कुर्छु
उसले पनि अत्याए भगवन्
म त अति मर्माहत हुन्छु
वास्तवमा उहाँका जति पनि पछिल्ला कविता सङ्ग्रहहरू छन्, तिनमा आध्यात्मिक चेतना र मृत्यु चेतना स्पष्ट झल्किरहेको पाउँछौँ । ‘सँघारैनेर’ कविता–सङ्ग्रहको अन्तिम कवितामा उहाँ लेख्नुहुन्छ–
समय अहो ! गोधूलि भएछ
पुगियो क्यारे मेरो घर,
जे होस् तिम्रै कारण मैले
गाउन पाएँ बाटोभर !
लामो छोटो जे होस् आखिर
यात्रा गर्नु थियो, गरियो,
हो, यो पनि मेरा ती यात्रा
तिमी तिमीले नै भरियो !
जानेहरू को छन् र पुगेका
जसले जत्ति गरोसन् अहम् ?
किन्तु म धन्य छु कि तिमीसम्म
पुग्नै पाएँ कमसे कम !
अहिले पनि उहाँ कविता लेखिरहनु भएको छ । उहाँले ‘भजन’ नाममा सिर्जेको अप्रकाशित कविता–सङ्ग्रहको पहिलो कविता यस्तो छ–
जत्ति जिउनु छ जिन्दगीमा
जिउँ म भरपूरै जिउँ !
तृप्त भै तिम्रो चरणमा
फिर्न पाऊँ हे प्रभू !